Baydhabo: Dowladda oo Roobow ka saartay liiska Musharaxiinta doorashada Koonfur Galbeed – Radio Daljir
Diseenbar 17, 2018 2:45 g 0
Wadaadkii caanka ahaa ee ka tirsanaan jiray kooxda Al-shabaab , horayna u soo noqday Afhayeenkii kooxda Al-shabaab ayaa gabi ahaanba maanta laga saaray liiska musharaxiinta u tagaan doorashada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya .
Go,aankan ayaa waxa uu ka soo baxay wasaarada arimaha gudaha ee dowladda fadaraalka Soomaaliya .
Roobow ayaa kuxiran xarunta ciidamada Nabad sugida ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho , wuxuuna xariga roobow uu sababay dibad baxyo rabshado watay oo ka dhacay magaalada Baydhabo ,taas oo keentay in ay dad ku dhintaan .
Qaar kamid ah musharaxiita utaagan doorashada Koonfur Galbeed ayaa maanta hoolka Baarlamaanka ka jeediyay qudabadahooda ,waxaana lafilayaa in maalita arbacada ah ay dhacdo doorashada madaxweynaha cusub .
Amaanka magaalada Baydhabo ayaa aad loo adkeeyay .
Madaxweyne Gaas oo maalinta beri ah ku dhawaaqaya musharaxnimadiisa (Sawiro)